कलाकार मनिशको संघर्ष, भन्छन्: पेटभरी मासु–भात खाएको दिन रातिबाटै पखाला चल्यो ! — Imandarmedia.com
कलाकार मनिशको संघर्ष, भन्छन्: पेटभरी मासु–भात खाएको दिन रातिबाटै पखाला चल्यो !
हाँस्य क्षेत्रमा कलाकार मनिश खड्का चर्चित नाम हो । नाम चलेका टेलिसिरियामा नदेखिएपनि यूट्युव र मंचहरुमा धेरैले रुचाएका कलाकारमध्येका एक हुन् खड्का । साविकको कैलालीको सुगरखाल गाविस–र्फसाथाई २०४६ बैशाख ६ गते जन्मेका खड्काले छोटै समयमा धेरै संघर्ष गरेर नाम कमाएका छन् ।
स्कूलमा पढ्नेबेलादेखि नै क्यारिकेचर, मञ्च हुने प्रस्तुतीमा रुचि राख्ने खड्काले रेडियोमा पनि काम गरे । कलाकारितामा सबैको एउटा विधामा कला र क्षमता हुन्छ, त्यसको अर्को पाटको लागि अर्को व्यक्तिको आवश्यकता पर्छ । तर, मनिश भने रचना वा शब्द, संगीत, गायन, कमेडी सबै गर्छन् । गीत लेख्छन्, गाउँछन्, संगीत पनि दिन्छन् र मञ्चमा पनि हाँस्य प्रस्तुती पनि खड्काले गर्छन् ।
उनले दुई दर्जन गीतहरु बजारमा ल्याएका छन् । सबै गीतमा शब्द, संगीत र स्वर आफैले दिएका छन् । त्यसैगरी म्युजिक भिडियोहरुमा अभियानको मुख्य भूमिका पनि आफैले पूरा गर्दै आएका छन् । देउडा, लोक र आधुनिक र कमेडी गरी करिब १ सय ६० भिडियोहरुमा अभियानको भूमिका पूरा गरेका छन् ।
कलाकार मनिश कसरी यो क्षेत्रमा प्रवेश गरे र सफलतामा पुग्न कस्तो संघर्ष गरे ? मनिशलाई मन पराउनेहरुको जानकारी दिने प्रयास गरेका छौं ।
कलाकारितामा कसरी प्रवेश गर्नुभयो ? र के कस्ता दुःख भोन्नुभयो र नयाँ योजनाभन्ने अनलाइन डबलीको प्रश्नमा खड्काले धाराप्रवाह यसरी भनेः
सानै उमेरमा यो क्षेत्रप्रति मेरो आकर्ष थियो । स्कूलमा पढ्दै गर्दा पनि केही कार्यक्रममा गीत गाउने र मञ्चमा हुने प्रस्तुती गरेको थिएँ । तर, पनि औपचारिक रुपमा यो क्षेत्रमा प्रवेश गरेको भनेको टिकापुर महोत्सवबाट हो । २०६९ सालमा टिकापुर महोत्सवमा मैले हाँस्य प्रस्तुती गर्ने अवसर पाएको थिए ।
मेरो कमेडी प्रस्तुती देखेर दोहोरी गायीका तथा चर्चित उद्घोषिका मञ्जु पौडेलले बोलाएर नै तारिफ गर्नुभयो । राम्रो छ भनेपछि मेरो हौसला बढ्यो । यहीबाट मैले औपचारिक रुपमा कलाकार बन्नुपर्छ भन्ने निर्णय गरे । मेरो पहिलो प्रेरणाको स्रोत टिकापुर उद्योत वाणिज्य संघ, जसले महोत्सवको आयोजना गरेको थियो । अनि कलाकार दिदी मञ्जु । उहाँले गरेको तारिफले मेरो हिम्मत निकै बढेको थियो ।
काम गर्दै गएपछि केही सामान जोडे । तर बसाई र खानापिन नमिलेकैले होला बिरामी परेँ । चेक गराउँदा जन्डिस भएको पत्ता लाग्यो तर उपचार गर्ने पैसो थिएन । त्यही बेला घरभेटीले म नभएको बेला बाहिरबाट चावी लगाई दिनुभो । फेरि ठूलो समस्यामा परेँ । कसैसँग भन्न पनि सकिन । काठमाडौँको बसाई साथीहरुमा धेरै दिन जान सकिँन । त्यसपछि सुरु भयो ठमेलको बास । दिनभरी घुमघाम गर्ने, साथीहरुसँग भेट गर्ने, साँझ परेपछि ठमेलतिर लाग्ने । त्यहाँ रातिसम्म चहलपहल हुने भएकाले रातिसम्म सडकमा हिड्दा अस्वभाविक हुँदैन थियो । अनि निन्द्रा लाग्यो भने गल्लीको कुनामा गएर सुत्थे । ओत लाग्ने ठाउँ खोज्दै जाँदा जहाँ भेटियो त्यही सुत्थे ।
विहान उठेर कुइरे ‘विदेशी’हरुले खाएर फालेको पानी बोटलमा बचेको पानीले मुख धुन्थे । नेपाली र विदेशीले फालेको बोटल अलग्गै थाहा हुन्थ्यो । नेपालीले फ्याकेका बोटलहरुमा पानी हुँदैन थियो तर विदेशीले फ्याकेको बोटलहरुमा आधा जति पानी हुन्छ । विदेशीले फ्याकेको बोटल खोज्दै जान्थे, भेटाएपछि हात–मुख धुने र शरीरमा लागेको फोहोर पानी टकटकाउथे र फेरि दैनिक सुरु हुन्थ्यो । त्यतिबेला कमलादीको मालाश्री रेकर्डिङ स्टुडियो निकै चलेको थियो । त्यसको अगाडि विहान रामजी खाँण, पशुपति शर्मा, खुमन अधिकारी, शंकर बिसीलगायत चर्चित कलाकाहरु जम्मा हुन्थे । म पनि त्यही जान्थे । सबैसँग नमस्ते गर्दै आफ्नो परिचय दिने र उहाँहरुको चिया र पाउँरोटी खान्थे ।
उपचारको लागि घरबाट मगाएको पैसा पाँच सय मात्रै बाँकी रह्यो । उपचार कसरी गर्ने ? फेरि चिन्ताले सतायो । माछा पोखरीमा जण्डिसको उपचार गर्ने ठाउँ भेटाए । त्यहाँबाट ४ सयको औषधि किनेँ । त्यो औषधिले सन्चो हुँदै गयो । फेरि दोहोरीमा काम सुरु गरे । महिनाको ७ हजार रुपैयाँ कमाउन थाले । दुःखको एउटा पाटको अन्त्य भयो । राति ओड्ने ओछ्याउने र शरीरमा राम्रो लुगा लगाउन थालेपछि जीवनमा ठूलै परिवर्तन भएको महशुस गरेँ । विस्तारै कार्यक्रममा भाग हुन थाल्यो ।
आलोचनाः कला नभएका तर पैसा भएका केही पात्रको प्रवेशका कारण कलाकारिता क्षेत्र केही आलोचित हुनु परेको छ । एकै पटक हिट हुने रहर निकै बढेको छ । दुःख गर्नुपर्छ भन्ने भन्दापनि जसरी पनि हिट हुने भन्ने मनोविज्ञानका कारण पनि केही विकृति पनि फैलिएको छ । कला, संस्कृतिलाई थप बलियो बनाउने भन्दापनि विकृत गर्ने चलन बढेको छ । जुन यो पेशाको लागि भाइरस हो । युवादेखि बुढापाकासम्मलाई फरकफरक किसिमले हसाउन सकिन्छ । केही ज्ञान दिएर पनि हसाउन र मनोरञ्जन दिलाउन सकिन्छ । यसमा केही कलाकारहरुले ख्याल नपुर्याएको देख्दा पेशाको नै बदनामा हुने चिन्ता पनि लाग्छ ।